Warm Welcome for Hero Bekele Gerba, June 2, 2018
PA Oromo Summer Day, Lancaster, PA (2018)
Hawaasni Oromoo Peensilvaaniyaa, Waxabajji gaafa 06/23/2018 magaala Lankaasteritti guyyaa Arfaasaa Oromoo (Oromo Summer Day) haala damaqinaan kabajachaa oolleerra. Kaayyoon guyyaa kanaa, miseensonni hawaasa keenyaa bakka tokkotti argamuudhaan aadaa fi eenyuummaa isaan akka calaqisiisaniif. Guyyaan akkasii kun waggoota darbanis kan ture yoo ta’u, kan baranaa bifa addaan kabajamee jira. Bara kana adda kan taasisu keessa tokko miseensonni hawaasa keenya bayyachaa deemuu fi jijjiramni hedduun argamuusaati. Bara kana, hawaasni keenya nagaa fi tasgabbiin akka kabajatuuf haalli siyaasaa biyya keenya keessa jirus abdii kan namatti horuu ta’ee waan argameef . Akkuma beeknu, hawaasni Oromoo Pensalvaaniyaa lammilee keenyaf yeroo irra gara yerootti nuffii tokko malee bira dhaabbachaa kan turee fi ammas kan jiru ta’uun isaa beekamaadha. Haa ta’u malee, bara kana xiyyeeffannaan keenyi irra guddeessi isaa bu’aa hawaasi miseesota isaaf kennuu fi gaheen hawaasa maal akka ta’e irratti kan xiyyeeffate ture. Isa kana sirritti hubachuun, koreen hojii gaggeesituu Hawaasa Oromoo Pensalvaaniyaa, qophii yeroo dheeraaf gochuudhaan akkataa itti hawaasni keenya barnoota fi hubannoo barbaachisaa argatan irratti bifa adda addaan qindeesinee hawaasni keenya fayyadamoo akka ta’an gochuu yaalleerra.
Walumaa gala, guyyaan Oromoo 2018 magaala Lankaasteer, sochiiwwan (activities) gurguddoo afur irratti kan bu’uurefate ture.
1) QOPHII TAPHAA IJOOLLEE (Children Activities)
Hawaasni Oromoo Pensalvaaniyaa baayyachuu miseensota isaa irra ija kawwatee socho’a. Kanaaf, obbo Fiqiruu, Balaay fi Abbaa Caffee mijaa’ina sagnataa sochii ijoolleef gumaacha guddaa gochuu isaaniif galata guddaa qabu. Yeroo dheeraaf, harmooliin( mothers) hedduun sababii ijoolleef jedhanii walgahii hawaasa Oromoo irraa akka hafaa turan hedduun keenya ni beekna. Rakkoo kana salphisuuf; koreen hojii gaggeesituu hawaasa keenyaa ciminaan furmaata barbaadaa turreerraa, ittis jira. Akkasumas bakki walgahii yoo danda’ame ijoolleefi mijaa’ina kan qabuu filachuun, maatiin rakko tokko malee akka isaan guyyaa isaaniitti bashannan gochuu yaallee jira. Gara fuula durattis ciminaan itti fufnee hojjenna jennee amanna. Bara kana guyyaa Oromoo darban irraa adda kan taasisu keessa tokko ijoolleen keenya sochii AADAA (cultural activities) adda addaa irratti akka qooda fudhatan goonee jira.
2) BARNOOTA FI MISEENSOTA HAWAASA OROMOO PENSALVAANIYAA
Barnoonni lafee dugdaa(back bone ) hawaasa kamii akka ta’e Dr Admaasu Tuchoo miseensi koree Boordii hawaasa Oromoo Dr Admaasu dubbatan. Hawaasni barnoota irratti hin hundoofine ykn hin ijaaramne, kufaadhaa jechuun miseensotaaf dhamsa guddaa akkas jechuu dabarsa . “ Barattootaaf, barsiisaan inni jalqabaa maatii yookiin warra barattootaa ti!’ jedhan. Barattoonni fi maatii isaanii erga waliin hojjetanii, hawaasni immoo akka hawaasstti maatii fi ijoolle bira dhabbachuun dirqama akka ta’es sirritti hubachiisaniiru. Kanaaf, hawaasni Oromoo Pensalvaaniyaa yoomiyyuu caalaa barnoota fi faayidaa isaa bu’uurefatee sochuu akka qabu sirritti hubatamee jira. Akkasumas, barattoota onnachiisuuf jajjabeessuf jecha bara kana barattoota sadarkaa lammaffaa (high school), kollejjii(yunversiitii), fi ogummaa fi tekinikaa adda addaa irraa eebbifamaniif hawaasni keenya maatiifi barattootaan baga gammaddan jechuun yaadateera(recognize) godheera. Itti aansuudhanis, baratoota yunversiitii irraa eebbifamaniin, fuula durattis <website> keenya irratti maxxansuuf qophii gochaa jira.
3) HEALTH CARE AWARENESS
Dura ta’aa hawaasa Oromoo Pensalvaaniyaa kan turan obboo Mitikuu(Kibiruu) Tolosaa, fayyaa ofii eegachuun jalqa waan hundumaa akka ta’u hubachiisaniiru. Kaanaaf, ogeesooni fayyaa adoeeffanoo fi barnoota bifa kamiinuu kennuun miseensota keenyaf hubannoo gama adda addaan ijaaruun akka isaan fayyaa isaaniif eeggannoo godha hubachiisuun dirqama nammummaa fi lammummaati jedhani dhamsa dabarsaniiru . Gumaacha <Penn Medicine > nuuf gumaache irraa qooda fudhachuukootti hedduun gammada jechuun gammachuu isaa daran ibsatee booda ogeesota fayyaa fi gumaacha <Penn Medicine > hedduu galatefateera. Isaanis Sister Rahel, Tittii fi Obsee dha.
4) COMMUNITY SERVICES AND COORDINATION (TAJAAJILA HAWAASA KEENUU FI QINDOOMINAAN HOJJECHUU
Tajjajilli hawwaasumaa of kennuu irraa jalqaba jedhu dura ta’aan koree hojii gaggisituu hawaasa oromoo obbo Baatii Ayyaana. Kana kan dhugoomsu , hojiin obbo Balay ragaadha jedhe. Tajaajilaa obbo Balaay hawaasaf gumaacheef konkolaata tokko qabuu Oromoo naanno Somaale irraa buqqahaniif akkasumas badhaasa konkolaata biraa Obbo Baqqalaaf kenneef hawaasni keenya badhaasa addaa (recognition award) isaaf kennee jira. Haaluma wal fakkaatuun gareen harmoolii gumaacha bara 2018 gumaachaniif kessumaa sagantaa gargaarsa buqqaatotaaf mana ijaaruu godhaniif badhaasa kana isaaniif kennameera. Jajjabinii fi dadamaqinsi akkasii cimee akka itti fufu shakkii hin qabnu.
Miseensi koree bojii hawaasa Oromoo kan ta’an obbo erga guddaa fi misiraachoo guddaa of keessa qabu hawaasatti erga himanii booda , miseenonnis carraa akkas kanatti akka fayyadaman cimsanii hubachiisaniiru. Abbootiin daldalaa (business owners), oggeessoni bitaafi gurgurtaa manaa (Real Estators) fi obbootiin hootelaa( restaurant owners), hojii akkasii ciminaan akka hawaasa keenya barbsiisan akkasumas miseensonni hawaasa keenyas akka itti fayyadamiif gorsa guddaa kennanii jiru. Obbo Dandiin, eeyyama mana bittaafi gurguruu ( licensed real estate) akka ta’ee himuun yoomillee dandeettifi beekumsa qabuun tajaajiluuf qophii akka qaban himanii jiru. Inni biraa , waa’ee ijaarsa maatii irratti hawaasni keenya ciminaan akka hojjetu ture. Yoo maatiin jabaatee hin jiraanne, hawaasni jabaachuu hin danda’u. Keesumaa, baratootaa fi ijoolleen keenya hawaatti dabaluun akk isaan rakkoolee gama adda addaan dhufan iraa baraaruuf hawaasni akka cimsee hojjetu miseesoni adda addaa himanii jiru. Keesumaa balaa sammuu (mental health, dhugaatii hin mallefi qorichoot sammuu hadoochan ( substance abuse, addiction and alcohol) irraa akkamitti dhaloota keenya akk baraarsinu irratti hojjechuun baayyee barbaachisaa akka ta’e hubannee jirra.
Walimaa gala, guyyaan Oromoo bar 2018, hedduu dammaqaafi jallatamaa akka ture ni amanna. Koree Hojii gaggeesituu hawaasa Oromoo Pensalvaniyaa (ECs , OCOP)
Dear OCOP members,
On behalf of the Oromo community of Pennsylvania, We would like to thank every one of you that made our warm welcome for our Hero Bekele Gerba on June 2 a memorable and a very successful event. First, we can't thank enough the coordinating committee assigned to this task by us. Mr Abel, Dereje, and Balay did not hesitate to take on this big task and they delivered with the great hard work and enthusiasm to serve as the leaders of this event.
We would also like to extend our deepest gratitude for your attendance and generosity in the welcoming reception of Obbo Baqqalaa Garbaa. The program was a success mainly because of your invaluable participation every step of the way. We also would like to send our heartfelt thanks to all sub-committees of fundraising, entertainment, food and serving, etc for taking care of your tasks with due diligence. However, there is a team whom we would like to give our special thanks, that is, of course, our SIIQQEE's women, thank you very much for everything you have done.
Obbo Bekele Gerba has reminded us that our Oromo citizens back home have said enough to being oppressed and want a government that works for them, not against them by killing and imprisoning them. The victories of our Qeerro/Qaarre struggle has enabled him to be free out of prison and now the whole country is on a better path because of our people's sacrifice. He has pointed out that our main role in this journey should be by supporting our people economically as they move towards democratization and freedom. And we sincerely hope you take that point to heart and do whatever you can to help your mother land.
Executive Commiittee of OCOP
The Oromo Community Organization of Pennsylvania was established in 1994 for advocacy, charity and educational purpose. The Oromo Community Organization in Pennsylvania is a non-political non-religious Organization that promotes the Oromo culture among Oromos and their non-Oromo friends from in and around the state of Pennsylvania, Delaware, and New Jersey. It is also the mission of the organization to disseminate awareness about the human right abuse against Oromos anywhere and advocate against any human right violations. The goal of this organization is to inspire hope, provide service and be part of a force that establishes stable communities in our area and the Oromo community in particular.
Guyyaa Amajjii 31/2020
Waajjira Muummicha Ministeera Itoophiyaatiif
Waajjira Bulchiisa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif
Qaama Dhimmisaa Ilaallatu Hundaaf, Bakka Jirtanitti.
IBSA EJJANNOO HAWAASA OROMOMOO PEENSILVAANIYAA HAALA YEROO ITOOPHIYAA IRRATTI
Hawaasni Oromoo Peensilvaaniyaa erga hundeeffamee kaasee hojiilee hawwaasummaa raawwatuun cinatti Oromoota biyyaa miidhamanii fi buqqahaniif gargaarsa garagaraa gochaa turuun keenya ni yaadatama.
Haala biyya keenya akkuma durii itti fufinsaan hordofaa akkuma jirru yeroo ammaa kana harka Mootummaa biyya bulchaa jira jedhuun ilmaan Oromoo Godinoota Dhiha Oromiyaa fi Gujii keessa jiran ajjeechaa, hidhaa fi gidiraa guddaan akka irra gahaa jiru miseensota keenyaa fi midiyaalee adda addaa irratti gabaafamaa jira. Rakkoon hamaan uummata nagaa irra gahaa jiru keessumaa zooni Qeellam Wallaggaatti addaan suukkanneessa akka tahe dhagahamaa jira. Tajaajilli telefoonaa fi interneetii naannoo kanatti addaan erga cite jiha tokkoo ol taheera. Miseensonni keenya hedduun sagalee maatii isaaniille kara itti dhagahan dhabaniiru. Odeeffannoo achii bahus sababa kanaan akka hawaasaatti sirriitti qulqulleeffachuu illee hin dandeenye. Waanti amma tahaa jiru kuni Hawaasa keenya baay’ee yaadesse, baay’ees dallansiisee jira. Haaluma kanaan gidiraa uummata nagaa irra gahaa jiru Hawaasni Oromoo Peensilvaaniyaa jabeesse kan mormuu fi kan dura dhaabbatu ta’uu, ibsa ejjennoo armaan gadiitiin mirkaneessa.
1)Uummata nagaa qe’ee isaa irrati ajjeesuu, badii malee hidhuu fi dararuun mootummaa biyya bulchaa jiruun raawwatamaa jiru hattatamaan akka dhaabbattu cimsinee gaafanna.
2)Dhiittaan mirga dhala namaa akka walii galaatti raawwataa jira jedhamu Qorannoo Walaba qaamota alaan (International Investigators)’iin hattattamaan akka godhamu gaafanna.
3)Muuxannoo waggoota darbanii irratti hundaahuun humna waraanaan biyya bulchuun balaa malee buhaa hedduu waan hin qabneef naannolee amma haala kanaan bulaa jiranitti olaantummaa seeraa eegsisuuf waraanni waan hin barbaachisneef Komaand Poostiin irraa akka kahu ni gaafanna.
4)Mootummaan gaagahama amma gahaa jiruun namoota beelaan rakkachuu dandahan, qe’ee isaanii dhiisanii baqatanii fi baqataa jiran akka tumsu ni gaaffanna. Nutis kara kana gahee keenya ni baana.
5)Rakkoo nagaa qaama hidhateen naannoo kanarra gahaa jira jedhamu yoo jiraate ammas maanguddoo Oromoo waliin qajeellummaa fi tokkummaan keessumaa uummata naannoo mari’achiisuun akka hiikamu gaafanna.
6)Mootummaan yeroon amma kan cehumsaa akka taheefi aangoo inni amma qabu kan filannoon mirkanaahe akka hin taane hubatee Filannoo fuula dura keenya jiru dirree dimokiraasii ballisee xiyyafannoo guddaan filaannoon kun kan haqaa fi bilisa akka tahuuf irratti hojjetu gaafanna.
Walumaagalatti mootummaan Itoophiyaa fi Oromiyaa uummata hunda ija tokkoon ilaalanii, isa tokko ofitti qabanii isa biraa immoo adabuun hafee, naannoo fi amantiin saba qoduun hafee rakkoo amma biyyatti keessatti babal’achaa jiruuf qajeelinaa fi gara bal’inaan mariin akka furuuf Abbootii Gadaa, Gaggeesitoota Amantaa, Paartilee Siyaasaa, Dargaggootaa fi qaama dhimmi isaa ilaallatu hunda waliin akka hojjetu gaafanna. Dhuma irrattis, uummatni Oromoo, Oromiyaa fi biyya gara garaa jirtan akkasumas sabaa fi sablammiin biyya Itoophiyaa dararaa uummata nagaa dhiha Oromiyaa fi Gujii irra gahaa jiru kanaaf hafuura obbolummaa fi Oromummmaan akka bira dhaabbatan akkasumas warra sagalee dhabeef sagalee akka taataniif cimisinee isinitti dhaammanna.
Hawaasa Oromoo Peensilvaaniyaa
Philadelphia, PA fi Lancaster, PA
Single Monthly : $5.00 USD - monthly Family Monthly : $7.50 USD - monthly Single Annual : $60.00 USD - yearly Family Annual : $90.00 USD - yearly
​Oromo Community Organization of Pennsylvania
Copyright © 2018 The Oromo Community Organization Of Pennsylvania.
Pictures from PA Summer Oromo Day, 2018
Dhaabbata Hawaasa Oromoo Peensilvaaniyaa